iyo amazon prime nhengo yakakosha here?
Kuru Nhau & Ongororo Iko Amazon Prime nhengo yakakosha here?
Iko Amazon Prime nhengo yakakosha here?
Mumakore matanhatu apfuura, Zuva reAmazon Prime zvishoma nezvishoma yave chiitiko chegore rega chinogona kukwikwidza Chishanu Chishanu zvese muhuwandu hwezvinhu zvakadzikiswa pamwe nehukuru hwezvakaderedzwa.
Asi Prime Day inongowanikwa chete kuAmazon Prime nhengo. Saka, mubvunzo ndewokuti, parutivi kubva pachiitiko chegore rimwe chete - zvakakosha here kuwana Amazon Prime zvachose?
Zvakanaka, ngatitarisei kuti zvinoda marii uye chii chatinowana:
Amazon Prime nhengo yemutengo: $ 12.99 / mwedzi kana $ 119 / gore
Amazon Prime nhengo inobatsira:
Yemahara, yekukurumidza kutumira
Exclusive discounts - tanga kuwana kwekutanga kune zvimwe zvidzikiso, kana imwe yemitengo-yakatemwa pazvinhu zvakatobviswa
Kuchengetedza uye kutumira kwemahara pane zvekunyorerwa
Prime Vhidhiyo - kuwana mafirimu, maTV, maAmazon anosarudzika ($ 9 / mo kukosha)
Amazon Kutamba - kuwana kwemahara kana akasarudzika chaiwo zvinhu mukati memitambo inozivikanwa. Imwe yemahara Twitch kunyorera pamwedzi ($ 5 / mo kukosha)
Amazon Music - kuwana kune 2 mamirioni nziyo. Kwete yekusavhiringidzwa neMusic Unlimited, iyo ine 60+ miriyoni (Spotify, Apple Music, YouTube Music mukwikwidzi)
Prime Kuverenga - Mhando dzemagazini uye rondedzero inotenderera yeMhando mabhuku emahara
Unlimited chengetedzo yemifananidzo - yakanaka imwe nzira kuGoogle Mifananidzo, iri kubaya basa rayo remahara
Iva nhengo yeAmazon Prime pano
Nekudaro, nekungotarisa iwo akapihwa mabhenefiti, Amazon Prime inogona kunyatso kuve yakakosha kune vakawanda vashandisi.
Semuenzaniso, kana iwe uri Twitch wenguva dzose uyezve uchitsvaga yakanaka yeNetflix imwe nzira - unogona kutsigira yako yaunodisisa streamer ($ 5) uye tarisa Prime Vhidhiyo ($ 9) mwedzi wega wega. Ndiyo $ 14 / mwedzi kukosha kwakadzvanywa kuita $ 13 pamwedzi, uchiwedzera matani ezvekuwedzera zvekutenga pamusoro.
Kana iwe ukangoitika kuti utenge zvisina kujairika zvinhu paAmazon mwedzi wega, iwe unogona zvakare kubatsirwa kubva kuPrime. Kutarisa nekukurumidza kune mamwe madhora gumi- $ 20 anoratidza kuti iwe unogona nyore kuenzana $ 2 dhisikaini pane chinhu (ndiwo muenzaniso unochengetedza). Wedzera iyo yemahara Prime shipping pamusoro peiyo uye mari yakachengetwa inotanga kuunganidza. Iyo $ 13 pamwedzi yakanyanya kuzvibhadharira yega nemawadhi mashoma eAmazon.
Kana iwe uri bhuku rakazvipira, iwe unowana mabhuku matsva, ma comics, nyaya pfupi, uye magazini kuti utarise paMhando yako zvachose mahara.
Photo gore backup
Kutarisa kupi kwekuchengetera ako mafoto? Google Mifananidzo iri kupedza basa rayo remahara , zvinoreva kuti vanhu vanozobhadhara yakawanda yekuchengetedza pane maSeva eGoogle kana kutsvaga imwe nzira. Kana iwe urikuto bhadharira Prime nhengo - izvo & apos; s yakanaka yakanaka yekuwedzera perk kuva nayo! Vasiri-Prime nhengo vanogona kusaina 100 GB ($ 2 / mwedzi), 1 TB ($ 7 / mwedzi) kana 2 TB ($ 12 / mwedzi) maakaundi paAmazon Photos. Nhengo dzePrimary dzinowana chengetedzo isingagumi yemaphikicha avo uye 5 GB ye server nzvimbo yemavhidhiyo avo. Ehe, iyo yekupedzisira ingangoita yekudzikira.
Prime Music vs Prime Music Unlimited
Chinhu chega chisinganyatso kupa kukosha kwakawanda ndeye Prime Music - inogumira kumatirandi mamirioni maviri, unogona kuva nechokwadi chekuti kuravira kwako kwakawanda hakungasangane. Nhau dzakanaka ndedzekuti nhengo dzePrimein dzinogona kukwidziridzira kuAmazon Music Unlimited (iyo chaiyo Spotify mukwikwidzi) ye $ 7.99 / mo., Nepo ichidhura $ 9.99 / mo. kune vasiri-Prime vashandisi.
Uye, hongu, iwe unowana mukana kune Prime Day, rinova zuva rekupenga rekutenga. Asi iwe unongowana izvo zvidzikiso kana iwe uri nhengo yepamusoro. Chengetedza ziso kune madhiri riinhi Prime Day inoswedera! Iyo inosungirwa kuunza imwe inotonhorera Prime Day foni inobata , TV inobata uye Bluetooth mahedhifoni anotengesa pakati pevamwe vazhinji, saka ramba wakashama!
nyowani motorola razr zuva rekuburitsa
Hacked Pokémon GO vhezheni ine DroidJack malware yakaonekwa, heino maapos ekutarisa kana yako APK iri yechokwadi
Galaxy Note 8 vs iPhone 7 Plus: kutanga tarisa
Maitiro ekuunza iyo Cherechedzo 8 & apos; s App Pair split-screen mapfupi kune chero Android foni
Coronavirus mhedzisiro: Verizon, T-Mobile, AT & T, uye Sprint waive kukanzura kukanzura uye kunonoka mari
Iwo akanakisa matete makesi eGoogle Pixel 2 XL
Tarisa uone iyo itsva TouchWiz paGreen S7 & S7 kumucheto: madingindira, & apos; squircle 'mifananidzo uye nezvimwe
Kugamuchira Criteria vs. Kubvuma Kuyedza